Manara-maso akaiky ny fivoaran’ny toe-draharaha, sady tsy mitsahatra mifandray amin’ireo manam-pahefana afrikana tatsimo ny Fitondram-panjakana malagasy, amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny.
Mikasika ny raharaham-pitsarana tamin’ny 12 Janoary 2021 indray, nolavin’ny Fitsarana ao Kempton Park ny fangatahana hamotsorana vonjimaika ireo voampanga izay nataon’ny mpisolovava azy ireo. Fanondranana harena sarobidy antsokosoko sy fandikàna ny lalàn’ny fadintseranana afrikana tatsimo no iampangana azy ireo.
Nanapa-kevitra ihany koa ny Fitsarana ao Kempton Park hanemotra amin'ny 1 Febroary 2021, ny fotoam-pitsarana momba ireo fandikan-dalàna ireo.
Tsy misy ifandraisany araka izany, etsy andaniny, ny fanenjehana ireo voampanga ho nandika lalàna afrikana tatsimo, nataon’ny Fitsarana any an-toerana ny 12 Janoary izay hitohy ny 1 Febroary 2021, ary etsy ankilany, ny fangatahana ny hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo voampanga, nataon'ny Fanjakana malagasy.